KungeWise Open: Kuisirwa uye Kugadziriswa kweAnoshanda Dhairekitori paLinux | Linux Vakapindwa muropa
ari heterogeneous network zvakajairika kupfuura zvatinofunga. Kune makambani mazhinji, masangano uyezve vashandisi vazhinji vanogadzira makomputa emakomputa mudzimba dzavo kuti vagovane dhata nemasevhisi mumwe nemumwe. Haisi nguva yekutanga kuti tibate nenyaya yekusagadzikana, sezvo pasuru iyo Samba yatakataura nezvayo zvakanyanya iri muenzaniso wakajeka wechishandiso chinotibvumidza kugovana nekugadzirisa mafaera pakati pesisitimu dzakasiyana dzeMicrosoft Windows uye Unix tichishandisa iyi protocol.
Asi pane akawanda masisitimu manejimendi manejimendi kana vashandisi vanofanirwa kuenda zvakati wandei vachida mamwe masevhisi akaomarara uye kumisikidza pane kungochinjisa faira pakati peaya masisitimu anoshanda, senge maSeva eLDAP emagetsi, kana kubata Microsoft Windows Yakaparadzirwa Network Service sezvo ichigona kuve Active Directory, kuti kunze kwerubatsiro rwechishandiso chatinoisa kwauri nhasi chingave chimwe chinhu chakaomarara kubva kune yako Linux distro ...
1 Chii chinonzi Active Directory?
2 Maitiro ekuisa uye kugadzirisa SengeWise paLinux?
Chii chinonzi Active Directory?
Kana iwe usingazive kuti chii AD kana Active Directory, iri tekinoroji yeMicrosoft yekushandisa dhairekitori sevhisi mune yakaparadzirwa network yemakomputa Nezve izvi, inoshandisa akasiyana maprotocol akadai seLDAP, DNS, DHCP uye Kerberos, zvirokwazvo vese vanonzwika kujairika kwauri, nekuti ivo vanozivikanwa kwazvo. Mucheka uyu unosimbiswa pakati pemakomputa akati wandei kana maseva anogadzira nekugadzirisa zvinhu zvakasiyana-siyana sevashandisi, makomputa, mapoka, mapassword, kuitira kuti vagadzire marogi emakomputa akagadzirwa muAD uye ndeenetiweki iyi.
AD ine chimiro chakamisikidzwa-mushe, muchidanho chehurongwa uye inobvumidza sysadmins kumisikidza marongero akasimba ekugona kuitisa kure kure nharaunda, shandisa zvidzoreso kumakomputa ese, govera maforodha uye zviwanikwa pane network, shandisa zvirongwa pamakomputa ese pane network, nezvimwewo, zvese nenzira inodzorwa uye yakapusa iri Inogona kuitiswa kubva kune chero muchina, kunyangwe kugoverwa kweGNU / Linux pamwe neyakakodzera software sezvatichazoratidzira mune ino dzidziso, kunyangwe paine dzimwe sarudzo.
Maitiro ekuisa uye kugadzirisa SengeWise paLinux?
Saizvozvowo Open ndeye MIT application inogona kukubatsira kubata AD kubva kune yako GNU / Linux kugovera. Saizvozvo zvakarerutsa izvo zvinodikanwa kumisikidza nekusimbisa muchina weLinux mukati meAnoshanda Directory dhatabhesi Kune izvi, iyi software package inoshandisa mamwe matombo anozivikanwa senge inozivikanwa winbind package. Iyi pasuru inosanganisirawo inozivikanwa winbindd daemon, iyo inonzwika kunge inozivikanwa kwauri sezvo ichishandiswa muSamba. Kutenda kune iyi daemon, unogona kubata iyi mhando yeWindows network kubva kune yako distro.
Kuti uwane gadza Saizvozvowo Vhura pane yako distro, iwe unogona kushandisa chishandiso senge mutorwa kushandura iyo DEB package kuita imwe mhando yebhanari senge RPM, nezvimwe, kunyangwe ini ndisingazvikurudzire uye izvo hazvipe chokwadi chekuti zvinoshanda nemazvo futi. Ini ndinotaura izvi nekuti ini ndawana mamwe matambudziko mune mamwe ma distros kuti ndiwane pasuru iyi, kunyange chiri chokwadi kuti muUbuntu neCentOS ini handina kana matambudziko ... zvokwadi, ndichaita matanho eUbuntu.
Kuisa iyo saizvozvo-open package rinova ndiro zita raanogamuchira, iwe unoriwana zviri nyore mumabhuku eUbuntu distro, uye nemaneja wayo wepakeji unogona kuiisa nenzira yakapusa nekuita iwo murairo:
Pamwe pane distros Newer Ubuntu ichave nematambudziko, uye pasuru yacho haizowanikwe. Usanetseke, unogona kutsvaga imwe nzira senge PBIS paGitHub, asi ini handikurudzire kuti iwe utsvage pawebhu vhezheni yeiyo DEB package, sezvo isiri yekuvimbika sosi…. Asi saka haufanire kutsvaga, chinhu chiri nyore kuita zvinotevera, wedzera chinongedzo ichi kubhurawuza rako uye dhawunirodha iyo DEB package.
Uye kana uchinge unayo, unogona kumhanya unotevera kuraira zvakare kuiisa uye ikozvino haufanire kunge uine dambudziko:
Iye zvino pasuru ichaiswa, isu tine zvese zvakagadzirira kumhanya uye kutanga kuzvishandisa. Panguva ino tinofanirwa kupindura ne setup kuti irishande nemazvo kunetiweki, uye nekuda kweizvi unofanirwa kuita unotevera kuraira mune terminal:
Iwe unofanira chinotsiva name-of-my-domain.es nedomeini iwe yauri kushandisa zvinoenderana nenyaya yako uye Administrator nezita reakaunti account kana mushandisi watinoda. Kana izvi zvangoitwa iwe unofanira kutangazve yako Linux distro (kana kungo tangazve iyo yakafanana-yakavhurika sevhisi kuitira kuti ione shanduko), iwe unogona kuzviita kubva kune yakajeka giraidhi kana kuburikidza ne reboot kubva kuoni, sezvaunoda.
Zvino, iwe ukangotanga, unogona kushandisa tty kana kuzviitawo kubva ku login menyu iyo inoratidzika chaiko panguva yekutanga kwe desktop desktop Ino nguva, pachinzvimbo chekupinda rako rekushandisa zita rekushandisa uye password sezvawaizowanzoita, unogona kuisa zita kana maneja iwe wawakagadziridza seizvi
Uye iwe zvakare nyora password uyo akati mushandisi kana maneja ane mukati meA Active Directory. Mushure mekudzvanya bhatani kuti titange chikamu tinenge tiri mukati, tichikwanisa kubata izvo zvatinoda ...
Ndinovimba kuti iyo dzidziso yakubatsira uye iwe unogona kubata yako AD nenzira iri nyore kubva kune yako GNU / Linux kugovera. Usakanganwa kusiya yako inotsanangura, mazano uye kusahadzika ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » KungeWise Open - Inoshanda Dhairekitori Kuisirwa uye Kugadziridza paLinux
Kana ichi chidzidzo chakakodzera chimwe chinhu, ndechekuchisiya chisina mhinduro ...
Alberto cuomo akadaro
Zvakanaka, kana ndikakwanisa kuwedzera komputa kudomeni asi pandakanga ndichida kupinda, ndakatadza, ndakashandisa izvo zvakasiyana: DOMAIN \_ mushandisi, mushandisi @ domain uye pakupedzisira chete mushandisi. Pasina kana chandaigona kupinda. Ndiri kuzoramba ndichitsvaga. WAZVIITA
Pindura kuna Alberto Cuomo
Iwe unofanirwa kunyora izvi mune terminal.
(uchifungidzira kuti dura rako DOMAIN.LAN)
Uye kana iwe uchingoda chete kuisa mushandisi, senge muWindows, nyora izvi zvimwe:
sudo / opt / pbis / bin / config FungidziraDefaultDomain ichokwadi
sudo / opt / pbis / bin / config InodikanwaMemberhipOf domain \_\_ vashandisi ^ kubva ^ domain